Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Maareeyaha Cusub wuxuu Helm ka qaataa Goobaha Dalxiiska ee Vail
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Kirsten Lynch ayaa loo magacaabayaa haweeneydii ugu horreysay ee agaasime ka noqota Vail Resorts
Lynch wuxuu ku biiray Vail Resorts sanadkii 2011 isagoo ahaa sarkaalka suuq geynta wuxuuna horey u soo qabtay jagooyin hogaamineed sare PepsiCo iyo Kraft Foods.
Kirsten Lynch, oo hadda ah Sarkaalka Madaxa Suuqgeynta, ayaa loo magacaabayaa haweeneydii ugu horreysay oo Agaasime iyo Xubin ka noqota Golaha Vail Resorts
Rob Katz, oo hadda ah madaxa fulinta ee Shirkadda, ayaa loo magacaabi doonaa guddoomiyaha fulinta ee guddiga.
Rob Katz wuxuu ahaan doonaa mid si buuxda u firfircoon oo ku hawlan go'aannada istiraatiijiyadeed ee muhiimka ah ee Vail Resorts.
Ryan Bennett, oo hadda ah madaxweyne ku xigeenka suuqgeynta, ayaa loo magacaabi doonaa sarkaalka suuq geynta Vail Resorts.
Goobaha Dalxiiska, Inc. ayaa maanta ku dhawaaqday in Kirsten Lynch, oo ah sarkaalka ugu sarreeya Suuqgeynta Shirkadda, loo magacaabi doono sarkaalka fulinta oo loo dooran doono guddiga maamulka Shirkadda, laga bilaabo 1da Nofembar 2021.
Waqtigaas, Rob Katz, oo ah sarkaalka madaxa fulinta ee Shirkadda, ayaa loo magacaabi doonaa guddoomiyaha fulinta ee guddiga wuxuuna si buuxda u ahaan doonaa mid firfircoon oo ku hawlan go'aannada istiraatiijiyadeed ee muhiimka ah ee Vail Resorts. Intaa waxaa sii dheer, waqtigaas, Ryan Bennett, oo hadda ah madaxweyne ku -xigeenka suuq -geynta, kor u qaadista dakhliga, ayaa loo magacaabi doonaa sarkaalka suuq -geynta Vail Resorts.
Lynch ayaa ku biiray Goobaha Dalxiisyada sannadkii 2011kii isagoo ahaa madaxa suuqgeynta oo hore u soo qabtay jagooyin hoggaamineed oo sare PepsiCo iyo Cuntada Kraft. Lynch waa xubin ka mid ah guddiga agaasimayaasha Stitch Fix, Inc., iyo sannadka 2019, waxaa loogu magac daray Forbes 'CMO Next list, oo loo aqoonsaday inay ka mid tahay 50-ka ugu sarreeya hoggaamiyeyaasha suuq-geynta beddelaya ciyaarta. Lynch wuxuu ku koray Chicago, markii ugu horreysay wuxuu ku booday isagoo lix jir ah hadda oo ah Vail Resorts oo uu leeyahay Wilmot Mountain. Waxay hadda ku nooshahay Boulder, Colorado iyada iyo saygeeda iyo laba carruur ah.
“Muddo 10 sano ah oo ay la joogtay Shirkadda, Kirsten waxay mas'uul ka ahayd isbeddelka iyo guusha dadaallada suuqgeynta xogta ee Vail Resorts iyo darawalka koowaad ee Kobaca, xasilloonida iyo abuurista qiimaha,” ayuu yiri Katz. “Marka laga soo tago lahaanshaha ganacsi la yaab leh, Kirsten waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu xamaasadda badan, ee aan waligay la shaqeeyay. Xamaasadeeda weyn ee mudnaanta fog ee isboortigeenna iyo sida aadka ah uga go'an tahay horumarinta hoggaaminta ee Shirkadeena ayaa ka dhigi doonta hoggaamiye fiican oo ka mid ah Vail Resorts. Kirsten sidoo kale waxaa ku hareeraysan doona koox fulineed oo aad u xoog badan oo kiraysan. ”
"Sharaf bay ii tahay inaan hoggaamiyo Vail Resorts agaasime guud oo aan ku dhisno dhaxalkii Rob ee dib -u -eegidda waayo -aragnimada buurta," ayuu yiri Lynch. “Waxaan aad ugu jecelahay Shirkadan, dhaqanka hoggaaminta ee aan dhisnay iyo 55,000 oo shaqaale ah oo Vail Resorts ka dhiga hoggaamiyaha warshadaha. Anigoo rajaynaya, waxaan ku faraxsanahay fursadaha kobcinta cajiibka ah ee Vail Resorts waxaana iga go'an inaan ka dhigno isboortigayada iyo Shirkadeena kuwo kala duwan, loo dhan yahay oo la heli karo. Si wada jir ah, waxaan u kobcin doonnaa ganacsigeena, waxaan u abuuri doonnaa hal -abuur iyo inaan sii wadno inaan ka shaqeyno hadafkeenna ah inaan u abuurno Khibrad Nololeed martidayada iyo shaqaalahayaga. ”